Ɔfã 14 Nnianim Nsɛm | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
Tete Kristofo no kaa Ahenni ho asɛmpa kosii asase ano nohoa. Yesu kyerɛɛ wɔn baabi a wɔnkɔka asɛm no, na ɔnam anwonwakwan so ma wotumi kyerɛkyerɛɛ wɔ nkurɔfo kasa mu. Yehowa maa wɔn akokoduru ne tumi a wɔde begyina ɔtaa a emu yɛ den ano.
Yesu maa ɔsomafo Yohane nyaa anisoadehu bi, na ohuu Yehowa anuonyam. Ɔsan nyaa anisoadehu foforo nso. Ohuu sɛ ɔsoro Ahenni no adi Satan so nkonim, na wamma Satan annya tumi bio da. Afei Yohane huu sɛ Yesu redi Hene, na 144,000 no ka ne ho. Yohane san huu sɛ asase nyinaa adan paradise, na nnipa nyinaa de asomdwoe ne baakoyɛ resom Yehowa.
NNEƐMA TITIRIW A WUBESUA
Sɛ yɛyɛ adwuma a Yehowa de ahyɛ yɛn nsa no a, ɛhyɛ no anuonyam
Hyira wo nkwa so ma Yehowa, na ma onhu sɛ wopɛ sɛ n’Ahenni no di wo so
Ma Yehowa nyɛ w’Adamfo paa
Tumi soronko bɛn na honhom kronkron no de maa wɔn?
Ná asɔfo mpanyimfo a wokum Yesu no pɛ sɛ wɔma asuafo no ka wɔn ano tom. Nanso wɔantumi.
Yesu Paw Saul
Ná Saul tan Kristofo paa, nanso ɔsesae.
Honhom Kronkron Baa Kornelio So
Adɛn nti na Onyankopɔn somaa Petro kɔɔ ɔbarima a ɔnyɛ Yudani yi fie?
Ɔsomafo Paulo ne ne mfɛfo tutuu akwan kɔkaa asɛmpa no wɔ aman a ɛwɔ akyirikyiri so.
Obi a Ɔhwɛ Afiase Bɛyɛɛ Kristoni
Honhommɔne, asasewosow, ne sekan fa asɛm yi ho sɛn?
Paulo ne Timoteo
Mmarima mmienu no boom yɛɛ adwuma mfe pii sɛ nnamfo ne mfɛfo asomfo.
Wɔde Paulo Kɔɔ Roma
Ná akwantu no yɛ hu paa, nanso biribiara antumi ammu ɔsomafo no abam.
Yesu maa Yohane nyaa daakye ho anisoadehu pii.
Yohane Adiyisɛm no ma yehu sɛnea Onyankopɔn Ahenni bɛma nneɛma asesa wɔ asase so.